Duulaanka baranbarada ee New York kuleylka dartiis | Saadaasha Shabakadda
Hadaadan jeclayn kuwa baranbaro, ama haddii aad cabsi qabtid, hubaal mid ka mid riyooyinkiinna ugu xun wuxuu ahaan lahaa magaalo ay iyaga ku soo duuleen, sax? Waxayna sidoo kale u muuqataa in hirarka kuleylka ay iyaga dhaqaajinayaan, kuwaas oo magaalada New York ay ku sugan yihiin dad badan oo hubaal inaysan maalmahan ku raaxeysan doonin.
In kasta oo aad u maleyn karto in cayayaankaasi ay jecel yihiin heerkulka sare, dhab ahaantii ma jecla. Xaqiiqdii, waxay sameynayaan waxay raadinayaan meel qabow oo ay iskaga difaacaan iyaga, sida lagu sharaxay Macluumaadka DNA.
Magaalada New York Sabtidii, Agoosto 13, heerkulbeegga ayaa akhriyey 36,1ºC waxaana jiray 65% ​​qoyaan; Axadii meerkurigu wuxuu istaagay 33,88ºC waxaana jiray huur 50%. Qoyaan, sida uu sharraxay borofisar ka tirsan Jaamacadda Texas ee Tyler, waxay jecel yihiin haddii ay la socoto heer-kul sare.
Waxyaabaha qosolka leh ee ku saabsan waxaas oo dhan ayaa ah in baranbaradu aysan duulin illaa ay naftooda khatar ku jirto mooyee, sidaa darteed haddii xaaladaha deegaanku aysan fiicnayn waxay lumi doonaan tamar iyagoo raadinaya meelo qabow; laakiin waxay kaliya sameyn doonaan haddii ay dhacdo mid aad u kulul oo qoyan, tan iyo tamar ka helaan kuleylka ku hareeraysan, sida uu sharaxay Dominic Evangelista, oo haysta Ph.D. oo ka socda Rutgers kuna takhasusay baranbarooyinka.
Sidaa darteed, kama duulayaan hal meel oo u duulaya si ay uga xanaajiyaan dadka reer New York iyo dalxiisayaasha ku raaxeysanaya fasaxyadooda, laakiin ujeeddada keliya ee ah inay raadiyaan gees ama meel dillaac ah oo leh cimilo wanaagsan oo iyaga u wanaagsan, tan iyo, In kasta oo kuleylka kuleylku iyaga dhaqaajinayo, waxay doorbidaan inay saacado iyo maalmo ku qaataan meelo qabow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Duulaanka baranbarooyinka ee New York kuleylka kuleylka
Isbedelka Cimilada ayaa soo afjari kara Ciyaaraha Olimbikada